Vashandisi ve Rotary uye fekitori - China Rotary Vagadziri
Multi-Rinoshanda Jersey Diki Roller Heat Kutamisa Press Sublimation Machines
Muchina uyu une akawanda-mashandiro akadai seyemagetsi asiri ekutaurisa kudziya module, chaiyo otomatiki kugara tembiricha kudzora, pneumatic booster, otomatiki roller ichitenderera, inflatable shaft, otomatiki kumucheto kururamisa etc.
Iyi lanyard rotary kupisa muchina wekudhinda yakakosha kune ribhoni / lanyard sublimation kupisa muchina wekudhinda, yakasarudzika dhizaini yekuwana iyo ribhoni, oiri kudziyisa roller dhiramu inogona kugadzikana uye ichienderera ichipa kupisa pane ribhoni, ita chokwadi chizere ruvara pairi.
Bata Screen Screen Dhairekita Textile Calandra Isa Mucheka Rotary Heat Press Press Machine
Muchina wekarenda uyu wakakodzera kuprinda muchina wekudhinda wezvose zviri zviviri roll zvigadzirwa uye machira zvigadzirwa pamwe ne sublimation kuchinjisa kwemabhanhire, mireza, T-shirts, isina-kurukwa, machira ehembe, matauro, magumbeze, mbeva mbeva, mabhandi, Nezvimwewo.
Kupfuura izvozvo, zvinonyanya kushanda mushe pakuenderera kwekutenderera kwemachira, ayo anogona kusangana nezvinodiwa nevatengi zvezvigadzirwa zvidiki zvematch. Zvakare iko kudhinda kwekuyedza kwemahombe fekitori sampuro.
Muchina wekarenda uyu unokodzera kudhinda muchina wekudhinda wezvose zviri zviviri roll zvigadzirwa uye sheet sheet pamwe chete ne sublimation kuchinjiswa kwemabhanhire, mireza, T-shirts, isina kurukwa, machira ehembe, matauro, magumbeze, mbeva pombi, mabhandi, Nezvimwewo.
Kupfuura izvozvo, inoshanda zvakanyanya mukuenderera mberi kwekutenderera kwejira, iyo inogona kusangana nezvinodiwa nevatengi zvezvigadzirwa zvidiki zvematch. Zvakare iko kudhinda kwekuyedza kwemahombe fekitori samu
Sublimation kupisa kupisa muchina wekudhinda unogona kushandiswa kune ese roll zvinhu uye jira zvinhu kupisa kuchinjisa. Inokodzera sublimation kuchinjisa makuru mabhana, mireza, T-shati, isina-dzakarukwa machira, machira ehembe, matauro, magumbeze, mbeva mapedhi uye zvimwe zvigadzirwa muchidimbu, kunyanya kuenderera kuchinjisa jira. Inokwanisa yekuenderera mberi nekudhinda kumhanya, kuzadzikisa zvido zvehukuru hukuru kudhinda mutengi.
Akangwara Kudzora Jersey Calandra Roll Heat Press Machine
3.2m calandra iyo inokodzera sublimation kuchinjisa T-shati, mabhana mahombe, mireza, machira asina kurukwa, machira ehembe, magumbeze, matauro, mbeva mbeva, zvitsvuku uye zvimwe zvigadzirwa muchidimbu, kunyanya machira emupumburu anoda kuramba achidhindwa.